Iinzame zokuBuyisela uKhenketho Fumana iBoost enkulu ukusuka kwiReturn of Cruise
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Iinzame zokuBuyisela uKhenketho Fumana iBoost enkulu ukusuka kwiReturn of Cruise
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ishishini lokuhamba ngenqanawa eJamaica
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. U-Edmund Bartlett, uthi ukubuya okucwangcisiweyo kweenqanawa zokuhamba ngenqanawa kuwo wonke amazibuko esiqithi, ukuqala phakathi kuNovemba, livoti elinamandla lokuzithemba ngabachaphazelekayo abaphambili bamazwe ngamazwe kukhuseleko kunye nemfuno yohlobo lweJamaica. Ikwabonisa ukuvulwa kwakhona ngokupheleleyo kweshishini elibalulekileyo kwiinzame zokubuyisela ukhenketho eJamaica kwaye liya kunceda kakhulu ekubuyiseleni imisebenzi efuneka kakhulu.
Amanani okufika ayenyuka, i-airlift yexesha lasebusika ibonakala ilungile, kwaye ishedyuli yokuhamba ebusika iya kuxakeke kakhulu.
NgoNovemba oya kubona iinqanawa ezininzi zingena e-Ocho Rios, eFalmouth, nasePort Antonio.
Amawakawaka aseJamican axhomekeke kwishishini lokuhamba ngenqanawa kwaye ngumqhubi obalulekileyo malunga nokufika kweendwendwe kunye nenkcitho.
“Ishishini lethu lezokhenketho liyakhawuleza ukuchacha kwimpembelelo yobhubhani we-COVID-19. Amanani abafikayo ayenyuka, ukuhamba ngenqwelomoya ngexesha lasebusika kujongeka kakuhle, kwaye ishedyuli yokuhamba ngenqanawa yasebusika iya kuxakeke kakhulu, nge-uptick ngoNovemba eya kubona iinqanawa ezininzi zingena e-Ocho Rios, eFalmouth nasePort Antonio, utshilo uBartlett.
Ezi ndlela zokuhamba ngenqanawa ziquka iThe World, i-boutique cruise line yasePort Antonio; iCarnival Sunrise, Norwegian Gem, MSC Meraviglia, AIDAdiva, phakathi kwabanye, ngenxa ye-Ocho Rios; kunye neNkosazana ye-Emerald yePort of Falmouth.
"I-Cruise yinxalenye ebalulekileyo yemveliso yethu yokhenketho kunye nomqhubi obalulekileyo malunga nokufika kweendwendwe kunye nenkcitho. Amawakawaka abantu baseJamaica baxhomekeke kwishishini lokuhamba ngenqanawa, ”wongeze watsho.
ICarnival Corporation, eyona ndlela inkulu yokuhamba ngenqanawa kwihlabathi, izibophelele ekuthumeleni iinqanawa ezili-110 okanye ngaphezulu (abakhweli benqanawa abangama-200,000), ngeempawu zayo ezahlukeneyo, kwisiqithi phakathi kuka-Okthobha wama-2021 no-Epreli ka-2022.
Ngelixa iRoyal Caribbean International, inqanawa yesibini ngobukhulu emhlabeni, iya kuphinda iqalise ukusebenza kancinci ukuya eJamaica ngoNovemba walo nyaka. Kananjalo, abaphathi bezohambo ngenqanawa baphinde bawuphinda umnqweno onamandla wokuqesha amawakawaka abantu baseJamaica kuluhlu olubanzi lwemisebenzi kwaye balindele uhlengahlengiso kulawulo lukarhulumente ukuze lube yinyani.
Ngohambo lweCarnival's 16-call kwisithuba seenyanga ezintathu ezizayo, ukubuya kukaMSC Meraviglia, kunye neRoyal Caribbean, Disney, kunye neminye imigca yokuhamba ngenqanawa elungele ukuqala ukuhamba ngenqanawa kwiCaribbean, iJamaica inokuba neenqanawa ezibuyela umva ngoDisemba, phantse yonke inqanawa. Ekupheleni konyaka, uBartlett ulindele abakhweli abahamba ngenqanawa abangaphantsi nje kwe-300,000 ukuba baye. tyelela iJamaica.
“Besiyithengisa kakhulu iPort Royal kubatyali-zimali bethu bamanye amazwe ngexesha leentengiso ezahlukeneyo phesheya kweelwandle. Ngethuba lentlanganiso yethu ne-TUI, babhengeze utyelelo olucwangcisiweyo oluninzi kunye neefowuni kwiPort Royal Cruise Port, ukuqala ngoJanuwari. Silindele ukuba neminxeba emihlanu ukusuka ngoJanuwari ukuya ku-Epreli 2022 ePort Royal. Sikwabambe iingxoxo namahlakani aphambili eDubai malunga nezicwangciso zokutyala imali kwimveliso yezokhenketho ePort Royal,” utshilo uBartlett.
Ngeli xesha lonyaka, i-Nieuw Statendam kunye ne-Nieuw Amsterdam yaseHolland America Cruise Line, iCrystal Cruises' Crystal Serenity kunye neCrystal Symphony, kunye neSeabourn Cruise Line's Seabourn Ovation, iRoyal Spirit of Adventure evela eSaga Cruises, zonke zicwangciselwe ukumisa ePort Royal.
Inqanawa yokuhamba ngenqanawa iya kubuyela eMontego Bay ngoJanuwari 2022.